Azia Atsinanana · Aogositra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Aogositra, 2009
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Aogositra, 2009
Shina31 Aogositra 2009
Shina21 Aogositra 2009
Kambodza20 Aogositra 2009
Indonezia: Mipatitaka ny fampihorohoroana
Indonezia17 Aogositra 2009
Nibahan-toerana tamin'ny televiziona Indoneziana ny fifampitifirana teo amin'ny vondrona Densus 88 miady amin'ny mpampihorohoro, ny polisy andaniny ary ny ankilany kosa dia ny vondron'olona heverina fa tarik'i Noordin Mohammed Top sy ny tariny, mpampihorohoro tadiavina indrindra tamin'ny 8 aogositra lasa teo tany ambanivohitr'i Temanggung anivontanin'i Java. Teratany Maleziana heverina ho...
Japana15 Aogositra 2009
Taiwan (ROC)13 Aogositra 2009
Alzeria : Taorian'ny Fifandonan'ireo Sinoa sy Alzeriana
Alzeria13 Aogositra 2009
Niteraka fifandonana teo amin'ireo mpifindra monina sy ireo teratany alzeriana ao an-drenivohitr'i Alzeria ny fidiran'ireo mpiavy sinoa. Zato teo ho eo ny fitambaran'ny teratany sy ny mpifindra monina nifanandrina tamin'izany, ary nampiasa antsy sy fonjam-by ry zareo. Nisarika resa-be mikasika ny fampiasan'ny sinoa vola ao amin'ity firenena ity izany fifandonana...
Myanmar (Birmania)11 Aogositra 2009
Japan: Fisintahan'ny mpizahatany Japoney an'Italia
Italia07 Aogositra 2009
Lazaina fa nihena ny isan'ny mpizahatany Japoney nandalo an'i Roma faramparany teo. Tsy noho ny krizy ekonomika ihany fa eo ihany koa ny tolotra ratsy ataon'ny trano fisakafoanana sy fandraisam-bahiny italiana ary ny tahotra ho voaendaka valizy sy finday nahatonga ny Japoney hisafidy toeran-kafa voaary kokoa. Vao herinandro vitsivitsy izay...